(sno) news » caalamka – Online pharmacy, buy cheap Viagra, discount Viagra, order Cialis
Aljazeera xagee bay diirada saari doontaa Tunisiya iyo Masar kadib?
DOXA:-Telefishanka Aljazeera ee xaruntiisu tahay dalka Qadar ayaa waxa uu si weyn hormuud ag ahaa halganka shucuubta carbeed ay ugu jiraan in ay ka takhulusaan keli talisyada carbeed ee la haray dunida cabeed,
Telefishanka Aljazeera ayaa waxaa uu joojiyay barnaamijyo badan oo uu baahin jiray
Waxana uu xooga saaray kicinta iyo dhiiri gelinta shucuubtu in ay ka hor yimaadaan keli telisyada,waxana…
Wax kabaro Golaha Sare ee Dalka Masar.
QAHIR:-Waxaa marka hore sharaf noo ah in akhyaarta kumanaalka ah ee ku xiran puntlandnews24.com ay noqdaan inta aanka ognahay kuwii ugu horeeyay ee webisite Somali ah ka daalacda warbaxin diirada lagu saarayo golaha sare ee ciidamada dalka Masar ,oo shalay lagu wareejiyay talada dalka Masar kadib markii uu xilka ka degay madaxweyne Mubaraak.
Golaha sare ee dalka Masar.
Waxaa golaha sare ee…
warar xilli dhow la helay ayaa sheegaya in Mubarak iyo qoyskiisa ay ka carareen dalka Masar.
QAHIRA: warar laga helay maanta oo jimco ah dad u dhow xukuumadda masar uu u waramay wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegay in mubarak iyo dhammaan qoyskiisa ay ka carareen dalkaas.
dadka laga helay warkan oo diiday in magacyadooda la sheego ayaanan tilmaamin meesha uu u kicitamay madaxweyne mubarak.
balse waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in Mubarak qudbadii uu xalay jeediyay aysan toos…
Islaamiyiinta dalka Urdun oo ka Warsugaya waxqabadka xukuumadda cusub ee uu soo dhisay Ra’isulwasaraha dalkaas.
URDUN:-Islaamiyiinta dalka Urdun ayaa sheegay in ay ka dhursugayaan waxqabadka xukuumadda cusub ee ra’izulwazaare Macruuf bakhiit uu soo dhisay taasoo ay ku jiraan qaar kamid ah axzaabta mucaaradka, iyadoo boqorka dalkaa C/lla Athan i uu tilmaamay xukuumadan cusub in laag doonayo isbedel lataaban karo kadib markii djowr isbuuc ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeeday ra’izulwazaaraha…
Masar oo udigtay Maraykankan.
QAHIRA:-Wasiirka arimaha dibadda ee Masar Axmed Abul qeyd oo u waramayay shabaakdda CBS ayaa kasoo horjeestay baaqyada ka imaanaya mareekanka ee ku aadan in bandowga laga qaado dalka masar isbedel degdeg ahna lagu sameeyo wuxuuna tilmaamay in mareekanku uu isku dayayo in uu masar ku qasbo sida uu isaga jecelyahay, talooyinkiisa ku saleesan siyaasaddana ay yihiin kuwa aanan faa’ido laheyn.
Ismiidaamin ka dhacday dalka Pakistan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac
PAKISTAN:-Wararka laga helayo dalka pakistan ayaa sheegaya in 14 qof ay ku dhinteen toboneeyo kalana ya ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ahaa oo saacado ka hor ka dhacay magaalada Marden ee waqooyi galbeed Pakistan.
Qof goob jooge ahaa ayaa sheegay in qof naftii hure ahaa uu isku qarxiyay xarun ciidan xilli ay ciidamada sameynayeen tababrkoodii suxabnimo.
Ciidamada ammaanka ee Pakistan waxey sheegeen…
Wasiir ka tirsan xukuumadda koonfurta sudan ayaa lagu dilay magaalada Juba.
JUBBA:-Afhayeen u hadlay ciidanka koonfurta Sudan ayaa sheegay in wasiirka horumarinta reer miyiga ee xukuumadda koonfurta Sudan Jimi Limi Mila iyo qof la socday lagu dilay xarunta koonfurta sudan ee Juba.
Flip Ajwar oo ah afhayeenka ciidanka koonfurta sudan ayaa tilmaamay in dawaralka Wasiirkauu rasaas ku furay wasiirka iyo qofkii la socday kadibna uu isaga isdilay, wuxuuna intaasi ku daray lama oga…
Koox qaraxyo kagaysan Lahayd Maraykanka oo denbigoodii qirtay.
Ciidamada ammaanka ee mareekanka…
Alqacida oo ku hanjabtay in ay dili doonaan Madaxweynaha Murutania.
MURITANIA:-Ururka Alqacida gaar ahaan kuwa ka dagaalama galbeedka Carabta ayaa sheegay in ay wadaan qorsho cusub oo ay ku doonayaan in ay ku dilaan madaxweynaha Dalka Murutania Maxamed Walad C/caziiz iyagoo gaarsiiyay farriin ay ugu hanjabayaan madaxweynaha dalkaas.
Alqacidada galbeedka carabta bayaan ay soo saareen oo laga sii daayay idacadaha maxaliga ee dalkaas ayaa tilmaamay in sababta ay u dilayaan…
Wasiirkii arimaha gudaha Masar oo maxkamad ciidan lasoo taagayo
QAHIRA:-Mas’uul ka tirsan xukuumadda Masar oo diiday in la sheego magaciisa ayaa tilmaamay in shalay maxkamad ciidan la saaray waziirkii arimaha gudaha ee xukuumaddii uu kala diray Mubarak kadib banaanbaxa looga soo horjeeda xukuumadiisa, iyadoo waziirkaas lagu heystay in uu qeyb ka ahaa dadaalada looga soo horjeedo mubarak ee lagu doonayo in xukunka looga tuuro.
Xabiib Alcadili ayaa la sheegay…